Football Khabar » युभेन्टसद्वारा च्याम्पियन्स लिग नकआउट चरण खेल्ने टोली घोषणा : को–को परे ?
युभेन्टसद्वारा च्याम्पियन्स लिग नकआउट चरण खेल्ने टोली घोषणा : को–को परे ?
इटालियन क्लब युभेन्टसले जारी सिजनअन्तर्गत युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा नकआउट चरण अन्तिम १६ का खेल खेल्ने टोली घोषणा गरेको छ । अघिल्लो दिन क्लबले अफिसियल रूपमा २२ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो ।
घोषित नयाँ टोलीमा यसअघि घाइते रहेका कप्तान जर्जियो चिलिनीले कमब्याक गरेका छन् । तर, घाइते डिफेन्डर मेरिह डेमारियल टोलीबाहिर रहेका छन् । टोलीमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोसहितका सबैजसो प्रमुख खेलाडी रहेका छन् ।
युभेन्टसले अन्तिम १६ को पहिलो लेगको खेल आगामी फेब्रुअरी २६ तारिखमा फ्रेन्च क्लब लियोनसँग खेल्दैछ । सो खेल लियोनको घरमा हुनेछ । त्यसपछि दोस्रो लेगको खेल मार्च १७ तारिखमा युभेन्टसको घरेलु मैदानमा हुनेछ ।
युभेन्टसको घोषित टोली :
जर्जियो चिलिनी (कप्तान)
माथिस डि लिग्ट
प्रकाशित मिति २१ माघ २०७६, मंगलवार १०:३३